Tady Lululook Ouluoqi, fehin-kibo mahaliana ho an'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Notsapainay ny tadin'i Lululook Ouluoqi, fehy mahaliana ho an'ny Apple Watch
Ny zavatra tsara momba ireo maodely Apple Watch vaovao dia izy ireo mifanaraka amin'ny kojakoja rehetra sy ny tadiny avy amin'ny kinova taloha ary noho izany isika dia afaka manohy mijery ireo tadiny izay tsy ofisialy fa tena mendrika izany.
Amin'ity tranga ity dia manolotra antsika ny orinasa sinoa Lululook ny tadinao Ouluoq, maodely mahaliana amin'ny resaka kalitaon'ny fitaovana. Ity kofehy vy tsy misy fangarony 316L ity dia manana dian-lolo sy famolavolana izay tena gaga amin'ny fomba itovizany amin'ny Apple original.
Tokony holazaintsika fa tsy fehezin'ny Apple tany am-boalohany velively, fa amin'ireo safidy rehetra ananantsika anio eny an-tsena mety ho iray amin'ireo fehy tsara indrindra ho an'ny Apple Watch eo amin'ny lafiny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina sy ny endriny. Andao hojerentsika amin'ny antsipiriany kokoa izay omen'ity fehy Ouluoqi ity amintsika.
1 Fitaovana sy famolavolana famokarana
2 Fanitsiana tanana tsotra
3 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Fitaovana sy famolavolana famokarana
Araka ny hitanao amin'ny sary, ny endriny dia mitovitovy amin'ny tadin-tànan'i Apple, ilay fitaovana ampiasaina taloha vy ny vy fanamboarana 316L Ary tamin'ny andro nampiasako azy tao amin'ny Apple Watch Series 0 dia azoko lazaina fa tsy misy mangirana. Azavao fa ao amin'ny Apple Watch dia manana takelaka miaro amin'ny efijery aho ary izany no mahatonga azy toa izany, tsy hoe mampijaly ilay famantaranandro aho araka ny lazain'ny sasany amiko, na dia tena 3 taona aza io ary io no ho fanovana.
Ny zavatra tsara dia eIty fehy 42mm ity dia hifanaraka amin'ny Apple Watch Series 4 vaovao vao natomboka 44mm, noho izany dia hampiasaiko foana aho mandra-pahazoako ilay maodely vaovao. Ny endrik'ity fehy ity dia tsara ary ny fomba ahafahantsika manitsy ny refiny dia tsotra sy haingana.
Fanitsiana tanana tsotra
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny fomba ahafahantsika manamboatra ny tadiny amin'ny haben'ny hato-tananay dia tena tsotra sy haingana, ao anatiny dia misy fanidiana kely fotsiny izay mivoaka amin'ny alàlan'ny fanindriana sy ny fanitarana ireo rohy tafahoatra. Mametraka tsotra kokoa tsy maintsy ampifanarahintsika ny rohy ary hamafisina moramora amin'ity fomba ity dia manao tsindry kely izy ary ahitsy tanteraka. Tena mora ny manitsy azy ary azoko lazaina fa raha ny maodely 42mm dia lehibe izy io, noho izany dia hiasa amin'ny mpampiasa rehetra izy.
Ny hany zavatra ratsy azoko lazaina momba ilay tadiny ary ampidiriko amin'ny teboka farany amin'ny famerenana dia ny fanesorana ireo rohy dia mandany vola kely kokoa hametrahana ao amin'ny tontolon'ny famantaranandro, tsy maintsy ampidirintsika miaraka amin'ny ora roa ireo teboka roa. satria tsy mihodina izy io, fa ity dia zavatra mitranga amin'ny tadiny henjana ary noho izany tsy lesoka mampatahotra koa fa tsara ny mihaona aminao. Amin'ny ankapobeny, ny endriny dia mitovy amin'ny tady rohy Apple ofisialy, noho izany dia afaka manamafy izahay fa tena atolotra anao raha mikasa ny hividy fehin-kazo mitovy amin'ny an'ny fehin'ny Apple ofisialy ianao.
Famerenana ny: Jordi Gimenez
Fitaovana famolavolana sy fanamboarana
38 sy 42mm habe
Mba hametrahana ny tadiny dia mila miditra amin'ny vatofantsika roa miaraka ianao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Notsapainay ny tadin'i Lululook Ouluoqi, fehy mahaliana ho an'ny Apple Watch
Azo ampiasaina amin'ny mpampiasa rehetra izao ny MacOS Mojave!